काठमाडौं, भदौ १३–ठेक्का लागेको ९ वर्षसम्म सडक नबनेको भन्दै काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का बासिन्दाले सडक विभाग कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । धर्ना बस्ने स्थानीयबासीको नेतृत्व सो क्षेत्रका सांसद गगन थापाले गरेका छन् ।
उनीहरुले काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ अन्तर्गत कपन र बूढानिलकण्ठ क्षेत्रमा १२ वटा सडकको ठेक्का लिएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसहित सडक विभाग कार्यालय चाकुपाटविरुद्ध धर्ना दिएका हुन् ।
चावहिल, कपनलगायत काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का सडक मर्मत तथा निर्माण कार्य गत वैशाखमै सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेस्म्म सडकको काम २० प्रतिशतभन्दा कम भएको स्थानीयबासीको भनाइ छ ।
फेरि पुरानै कम्पनीलाई २ वर्षको म्याद थप गरी ठेक्का दिन लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाको नेतृत्वमा त्यहाँका उपभोक्ता र स्थानीय सरोकारवालाले सडक निर्माणमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य नहुँदासम्म धर्ना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सांसद थापाले आफूहरुको अनुरोधलाई बेवास्ता गरे सडक विभाग र मन्त्रालयविरुद्धको सडक संघर्षलाई सिंहदरबारभित्र लाने चेतावनी दिए ।
काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ भित्र दर्जन बढी सडक निर्माणधीन अवस्थामा छन् । अधिकांश सडकको ठेक्का शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको छ । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भक्तपुर नगरकोट सडक अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा छन् भने संसद्को विकास समितिले अनुगमन गरेर निर्माण सम्पन्न गर्न सचेत गराएको छ ।
चावहिल–जोरपाटी सडक खण्डको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । हालैमात्र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै कपन क्षेत्रको खानेपानीसम्बन्धी निर्माणको ठेक्का पाएको छ ।
अब नेपालका बैंकमा विदेशी बैंकले पनि रकम राख्न पाउने